Fampiasam-bola vahiny : karohina ny mpiara-miombon’antoka italianina | NewsMada
Fampiasam-bola vahiny : karohina ny mpiara-miombon’antoka italianina
Hatao, ny 17 sy 18 oktobra ho avy izao, any Rome, Italia, ny fihaonana toekarena eo amin’ny mpandraharaha malagasy sy italianina. Marihina fa tsy foara na varotra fampirantiana ity hetsika ity, fa tena fihaonana sy fikarohana fiaraha-miombon’antoka amin’ny orinasa italianina. Tanjona ny hampiroboroboana ny sehatra azo atao sy hisarihana ny mpampiasa vola italianina ho aty Madagasikara.
Ny andro voalohany, hisy ny fampahafantarana ny fikambanana Confindustria sy ny mpikambana ao aminy. Mandritra ny 18 oktobra, fivoriana eo amin’ny mpandraharaha tsy miankina malagasy sy italianina, karakarain’ny Antenimieran’ny varotra sy ny indostria italiana-malagasy (CCIM).
Efa maro ny mpandraharaha sy orinasa italianina aty Madagasikara, saingy tsy tena mbola mivelatra sy tsy ampy. Tena maro amin’izy ireo ny misehatra amin’ny fizahantany. Eo amin’ny fifanakalozana ara-barotra, mitentina 22,9 tapitrisa dolara ny vokatra naondrana tany Italia, ny taona 2016. Anisan’ny misongadina amin’izany ny akanjo sy ny lamba ary kojakoja miaraka aminy, ny fikarakarana ny hena sy ny hazandrano, ny harena an-kibon’ny tany, ny taozavatra. Mikasika ity farany, fantatra fa mila ezaka tsara kokoa, satria any amin’ny firenen-kafa any Eoropa, toa an’i Frantsa ny italianina no mividy ny taozavatra malagasy. Liana izy ireo ny hanafarany mivantana avy aty Madagasikara.